Zvishandiso zveCord, Angle Grinder, Kuputsa Nyundo - Benyu
Nyore kutakura, nyore kushanda pakakwirira uye nhete nzvimbo
MOTO HAMMER SDS-Max
Inorema-basa rotary nyundo yakagadzirirwa vashandisi vashandisi
Yakanakisa mhando, yepamusoro kuita uye mushandisi-inoshamwaridzika ergonomic dhizaini
Zhejiang Benyu Tools Co, Ltd. (raimbove zita Zhejiang Zhongtai Zvishandiso), yakavambwa muna1993, inyanzvi yemagetsi maturusi ekugadzira muChina. Kuburikidza anopfuura makore makumi maviri nemanomwe ekushanda nesimba uye kuenderera kwehunyanzvi, kambani yakasimbisa kugona kweR & D, kugadzira, kushambadzira uye mushure mekutengesa sevhisi.
Featured zvigadzirwaFeatured zvigadzirwa
Nyundo Drill 26MM BHD 2630
Inorema-basa rotary nyundo 26MM BRH2618
Impact Drill 13MM BID1303
nhau dzichangoburwanhau dzichangoburwa
China Yepasi Pese Hardware Ratidza 2020
China International Hardware Show (CIHS) yakavambwa muna 2001.Mumakore gumi apfuura, China International Hardware Show (CIHS) inoenderana nemusika, indasitiri yebasa uye inokura nekukurumidza. Izvozvi zvave kujekeswa zvakajeka senyika yechipiri pakukura Hardware showa mushure meInternational HARDWARE FAIR COLOGNE kuGerman.
Chishandiso Viwanda Musika Mamiriro
Parizvino, maererano neiyo bhizinesi modhi yeChina chishandiso indasitiri, chikamu chayo chinopa iyo "chishandiso e-commerce" chimiro, ichishandisa iyo Internet sekuwedzera kune yekushambadzira chiteshi; nepo ichipa zvigadzirwa zvakaderera mutengo, inogona nehungwaru kugadzirisa isina kudzika indasitiri kurwadziwa mapoinzi. Kubatanidzwa kwezvinhu zvekumusoro nekuzasi kweInternet uye indasitiri yezvishandiso inopa vatengi kuchengetedza-mari,
Kufananidza kweyekunze neyekunze chishandiso indasitiri
Maturusi ekune dzimwe nyika anonamira kukosha kukuru kumakambani kukosha kukosha. Vamwe vekumba vanovimba nemasupidhi nemari. Vanotarisirwa vatengi vezvipfuyo uye zvekunze zvishandiso zvakavharwa mukutanga, chaiwo maindasitiri, uye makambani ane tarisiro yebhizinesi. Ivo vakazvipira kuvapa iwo zviwanikwa izvo zvaive zvichishomeka mumatanho ekutanga ekukura kuvabatsira kuti vawane kukurumidza kukura mubhizimusi kukosha.